Haasaan jalqabaa Tiraamp oggantoota muraasaan qeeqamee - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Prezidaanti Traamp
Haasaan Donaald Traamp yeroo jalqabaatiif walgahii Mootummoota Gamtoomanii (UN) irratti taasiseen miseensoota gamtichaa muraasaan qeeqamaa jira
Prezidaantichis haasawa isaatiin Iraaniin warra ''bulchinsoota garee hin amanamne xiqqoo'' dabaluun Ameerikaan gochuuf kan dirqamtu yoo ta'e ''Koriyaa Kaabaa gutummaatti balleessuu ni dandeessi,'' jedheera.
Ministirri aajaa alaa Iraan gama isaatiin: "Haasawaan jibbaa Traamp kan warra bara durii fakkaata,'' malee kan mootummoota gamtoomanii miti jedheera.
Haasawi tramp kan xiyyeefate addunyaa biyyoota ofiin ofi bulchaniin gutamuun foyya'iinsa lammeeleef hojatan ta'u kan qabu ture, garuu irra caala ''biyyoota hin amanamnee'' kanneen ''mashaqaa har'aatiif madda'' jedheen irratti kan fuullefate ture.
Waashingtan irra dedeebiin yaalii misaa'eela isheetiif Koriiyaa Kaabaa akeekachiiftee jirti. Kunis kaayyoo Mana maree Nageenya Motummoota Gamtoomanii kan cabsuudha. Kibxatas, Obbo Traamp ''namtichi rookeetti ergama balleessaa irratti argama,'' jechuun oggannaa Koriyaa Kaabaa, Kim Joong-un qeeqee jira.
Ameerikaan ofii shee fi michoota ishee baraaruuf kan dirqamtu yoo ta'ee, gutummaatti Koriyaa Kaabaa balleessu malee filannoo biraa hinqabnu,'' jedhe.
Ejansiin oduu Royitasri tokko akka jedhetti, miseensoota keessa tokko harkaan fuula isaa kan dhokse yoo ta'u, gumgummiinis galma guutee ture.
Ministirri Ajaa alaa Siwiidiin, Maargoot Waalsitroom, haasawicha harka marachuun hordoofaa turtees, ''Innis haasawa dogoggooraa, bakka dogoggoorraatti dhaggeeffattoota dogoggooraatiif dhiyaate ture,'' jechuun BBCtti himtee jirti.
Goodayyaa suuraa Karaa mira gubbaatii: Bakka bu'aa Israa'eel, Siriiyaa, Iraan fi Saawud Arabiyaa haasaa Traamp dhagaa jiru.
Ogganaan Ameerikaas ''qulqulloota baayyee'' ''cubomtoota muraasa'' mormu jedhameera. Innis Iraaniin '' abbaa hirree malaamalaa fakkii dimokraasii soobaa booddee dhaabatu'' jechuun waameera. Akka isattiis, dhimmoonni mummeen isaan alatti eerganis, 'walitti bu'iinsa, dhiigaa dhagalaasuu fi jeequmsa' dha.
Akkasumas Obbo Traamp Venzuweelaa irrattis xiyyeefate ture. Innis ''mootummaa malaamaltuu abbaa hirree soshaalistii'' jechuun waamuun, Ameeriikaan tarkaanfii irratti fudhachuuf qophaa'aa akka jirtu akeekachise.
Ministirri Ajaa alaa Venzuweelaa Jorgee Arre'iza waan inni 'sodaachisaa'dha jedhenis hin fudhanne.
"Traamp prezidaantii addunyaa miti…sirriiyyuu motummaa ofii saatu haalaan mulchuu hin dandeenye,'' jedheeniira.